Step by tilmaamaha tallaabo inaad kala soo baxdo Music ka YouTube in Your iPod oo kala duwan
Weligaa ma la dareen ku saabsan dhagaysto habayn ah oo aan weli u ogaan karaa ugu safri kartaa weli on YouTube? Beddelidda badan dhawaaqa ka YouTube ka yar hawl badan waxa ay u muuqataa. Dhammaan waxa aad u baahan doontaa waa dukumeenti dhawaaq weyn iyo qaar ka mid ah awoodaha PC effortlessly bartay.
Baro feature YouTube la dhawaaqa u fiican. In kasta oo xaqiiqda ah in muuqaalada badan oo laga yaabo in xubno ka laxan aad u baahan tahay, qaar ka mid ah inuu hagaajin doono shaqada waxaa ka mid ah yihiin kuwa kale. Waa in aad hubisaa in ay dhagaystaan ​​jidka oo dhan iyada oo loo marayo si loo xaqiijiyo ma jiraan dhibaatooyin ama caqabado sameeyo.
Akownnada la URL muujinta ah. Just dhaqso ah gudaha bar goobta si ay u doortaan URL oo dhan oo ka dhacay Ctrl + C si ay nuqul
Beddel rikoorka isticmaalka goobta xor ah document Isbadal. Degaanada sida freefileconvert.com ama mediaconverter.org oggolaan doonaa inaad gasho URL ay ku jiraan warbaahinta aad dhiranaan iyo waraaqaha. Waxay sidoo kale u oggolaadaan in aad dooratid record sort dhalid doonay (mp3 iyo mp4 ugu fiican waa u Lugood) iyo email ay isku beddeshay record adigu. Isku day in aadan bixin maamulka this. Haddii ay dhacdo in goobta codsado in aad bixiso, ka heli kale; iyagu waa Fadli ah halkaas.
Fadhiiso dhagan for email ah. Email Tani waxay qaadan kartaa saacad ama intaa ku tiirsan korkiisa Beegidda dokumentiga iyo arrinta server ee.
Download dokumentiga ka email. Aasaasiyan midig ka jaftaa xidhiidhka iyo soo qaado Save File ama Save As. On fursad off in kuwa dheeri dukumintiga aan aad iska xanaajin u meel download, baadhaan, waayo, in aad downloads qabanqaabiyaha ama on desktop.
Xaq-ka jaftaa dokumentiga la wadaago in la beddelo xogta luuq ah. Wixii Windows waa inaad tagtaa Guryaha> Details; u Mac, u tag Hel Info. Data horyaalka xaq u habayn, nin saanac ahu, iyo wixii la mid ah
Dhaqaaq dokumentiga ku riday qabanqaabiyaha habboon Lugood. On fursad off in Lugood ayaa la filayaa inay kala soocaan si dabiici ah soo abaabulay Lugood Music. Si kastaba ha ahaatee, aad awoodo muhiimad u furan Lugood iyo jiidi diiwaanka galay Maktabadda. Waxaa waajib ah in nuqul dokumentiga aad iyo garto barta ku haboon. Haddii aan, adigu baqshad.
Play luuq ah. Hubi sanqadha waa xaq oo meel. Inkasta oo aad ku shiidi iska, xaqiijiyo in Title, Artist, Album Artist, sifayn, mana ogin meesha ay yihiin wax ku ool ah diyaarin. Waxaad sidaas oo kale u baahan tahay in lagu daro shaqada collection of farshaxanka.
Hagaagsan aad iPod. Waxaad hadda heshay habayn lagu eego la mid ah sida aad music kale.
Step by tilmaamaha tallaabo inaad kala soo baxdo YouTube ee music isticmaalka TunesGo
Wondershare TunesGo waa wax sax ah in la kulmi doonaa baahida music oo dhan. Waa barnaamij gebi ahaanba bilaash ah in Windows iyo sidoo kale Mac la soo bandhigay karaa qaabka shaqeeya. Qaado dib markii progressions hooseba inay soo bandhigto barnaamij bilaash ah oo mahad duuban muuqaalada YouTube iyo music.
Haddii aad wax kama qaba, booqo URL ee la socda in ay soo bixi qabsashada ugu dambeeyey ee Wondershare barnaamijyada TunesGo waayo, aad Windows ama Mac-dhismeedka ka shaqeeya.
Marka laga soo tago degsado diiwaanka dhawaaqa / feature si degdeg ah, sidaas oo kale aad u isticmaali karto wax muhiim ah oo kala duwan oo la TunesGo Wondershare. Marka aad soo bixi codadka / muuqaalada laga internetka, aad ugu gudbaysaan document kala duwan abaabusha qaar ka mid ah kuwaas oo xitaa aan fuliyo aad ciyaaryahan. Si kastaba ha ahaatee iyadoo TunesGo Wondershare, aad samayn karto oo aan wax badan oo kala isbedel badan booska document kasta oo gaadmada ah oo ku haboon in lagu ciyaari karaa iyada oo aad ciyaaryahan.
Download music YouTube ah
Marka aad soo bixi oo wax ku ool ah soo bandhigay barnaamij Wondershare TunesGo ah, waxaad bilaabi kartaa baaritaan iyo duuban muuqaalada YouTube iyo music ah oo aan waxba. Waxaad sidaas oo kale waxaa ka mid ah waxyaabahan iyo codadka maktabadda galay si degdeg ah
Maxaad Gurtida tago waa ugu fiican YouTube music downloader
TunesGo waa wax ku ool ah ka badan oo si fudud loo fahmi. TunesGo Wondershare bixiyaa macaamiisha ay isku dhaf ah oo ay ka mid yihiin isbeddel maamul document group, sarrifka ee diiwaanka, daryeelka iyo nadaafada ee maktabadaha music sidaas. Sidaas marka aad kala soo bixi barnaamijyada TunesGo Wondershare, waxaad ka heli tuulmooyin burbur ah ayaa sidoo kale qaybaha kala duwan.
Download Speed: Xawliga download barnaamijyada Wondershare TunesGo waa badan marka la xafiiltamaan ay barbar dhigay. Samaynta waxay leeyihiin si ay u dhisaan alaabta hab in backings dajinta deg deg ah rogrogo.
Heerka guusha Download: TunesGo Wondershare hubiyaa jagooyinka document kala duwan taas oo ah mid ka mid ah sababaha dhabta ah heerka ay guul download gebi ahaanba sare marka lala kale YouTube ka barbar diraasad degsado alaabtii muusikada. Waxaad ka YouTube iyo ka dib markii isbedel in ka badan si ay u rikoor booska la taaban karo la barnaamijyada TunesGo isku soo bixi kartaa wax kasta oo kasoo muuqday document.
Awoodda Pro: TunesGo Wondershare aad furnishes leh qaybaha kala duwan ee laga soocay si fudud u duuban muuqaalada YouTube iyo waraaqaha dhawaaqa. Ujeedada ka mid ah injineerada TunesGo ahaa inuu garaaco khasaaraha Lugood. Sidaas darteed, markii aad ka soo dejisan barnaamijyada tani xad-dhaaf ah oo ay Wondershare, ma ahan oo keliya in aad fursad ay ku soo bixi tiro ballaadhan oo ah muuqaalada YouTube hesho. Si kastaba ha ahaatee sidaas oo iyaga waxaad ku dari kartaa maktabadda, iyaga ugu kululaataa, oo iyaga u taliya, nadiifi iyo beddelan in aad qalab Android ama arrimo degdeg ah.
Features in awood TunesGo si ay u gudbiyaan music in iPod iyo aaladaha kale oo dhan
Your fiican Lugood jaallahay
Kormeeraan, ogaato iyo dajiyaan aad music in TunesGo, ee Lugood saaxiib fiican ee Android iyo macruufka.
TunesGo xorayso aad music, samaynayaan wixii Lugood ma sheegi karo.
Waxaad hadda ku badasho si kasta aad music ka iPhone, iPad ama iPod mar kale galay Lugood aad. Haddii aad badiyay macluumaad PC ama la siiyey qalab muusig preloaded. TunesGo dhaqaaqo kartaa music ka macruufka aad qalab aad Lugood maktabadda aad kombuutarka galay.
Lugood iyo Android - wada dambeyntii! TunesGo kala Sooco ka ah caqabadaha of Lugood iyo ogolaanaysaa Androiders isticmaali Lugood fudud sida qalab macruufka ah. Dheellitir iyo dhaafsadaan maktabadda Lugood aad si aad qalab Android effortlessly la TunesGo.
Just qulquli oo heli music online la beddelo si uu furmo suuqa standalone ka hab dheeraadka ah. Hadda waxaad ku qori karta ama download music ka YouTube iyo dalal kale oo si gaar ah music galay maktabadda Lugood aad. Mid ka mid ah TunesGo qaababka cusub waa awood u leh inay ka mid laynoogu ururinta iyo sumadaha music aad downloads iyo cajalado.
Nadiifi oo idil Music Library.
TunesGo si dabiici ah baarayaa iyo tidies ilaa maktabadda music aad ula sax hal. Waxaad sidaas oo jir ahaan DEAD kartaa music; isbedel ururinta faafidda sancada, tirtiro koobi, ama daad kuwan raadkaygay ku seegay. Icon aad music kulan waa hadda la yaabanahay
> Resource > Music > Download Music ka YouTube in Your iPod iPhone iyo Qalabka Kale